Họtelu ndi di na Minna, Niger - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Situated in west central Nigeria and capital of the Niger state, lies the ...
IHE NKOWA BANYERE MINNA
Minna bu nke di na steeti nwere ala kachasị ukwu na Nigeria; otutu ndi bi na ya kemgbe ọtụtụ oge bu ndi alakụba.Ugbọ okporo ígwè na Minna bu nke aruru n'oge ndi mbu nke narị afọ itolu (19 senchuri) nke ka bu kwa usoro ime njem di nma nke ukwuu ruo ụbọchị taa. Minna jupụtara na nkume nke na-eje ozi karichasi a maka nzube azụmahịa nye ndi ụlọ ọrụ na ewu ụlọ.
Dị ka Minna bụ ebe isi na enye ọkụ eletrik na Nigeria, otú ahụ bụ kwa ka obodo a na- etinye oge dị ukwuu na oru ubi, ji bụ isi ihe nkoputa nke ihe oru ubi na-amịpụta na Minna na otutu ihe ndị ọzọ dị ka owu (Cotton), Ose ala (Ginger), Ọka Guinea (Guinea corn). Azumahia nke Ehi, ulo oru mmeputa mmanya, Ngwuputa nke ọlaedo na nhazi nke mkpuru osisi Shea, na- akpụkpọ anụ na ọrụ gbamgbam.
Minna nwere ọtụtụ ebe njem nleta, ọ bụ na ole na ole a na aga ikpoputa aha ha, ị ga- enweta ihe iju anya na enye kwa afọ ojuju na ọnụnọ gi na obodo Minna. Ga rue Bida ebe uwe/akwa, ọrụ ọla nzu, ọlaọcha na ihe mgba na aka nke epekele ngiga bụ isi oru ihe mmepụta ya, Gurara Fall, Okwute Zuma nke di ukwuu, obodo nke ezi ihe okike mara nma gbara gburugburu ya bu ebe Mayanka Falls di, otu akụkụ nke mmiri nta Shiroro (Shiroro Dam) na-eje ozi dị ka ebe ezumike na ogige ebe ntụrụndụ nke onye njem nleta. Akụkọ Nagwamaste Well na Kainji Lake, ogige nke govoomenti etiti nke ekere na afo 1970 nwere otutu ngọzi nke fauna na Flora.
Ime Njem na Minna
Ilorin na Abuja (mba isi obodo nke Nigeria) bụ nanị kilomita ole na ole site na isi obodo, Ịbadan, Lagos ọbụna Kano nke di na mba mpaghara ugwu bu nke a pụrụ iji ugbo okporo ígwè ga sita na Minna. Odo ugboelu nke Minna bụ ụzọ nke apuru iji site na ikuku banye n'ime obodo Minna.
Họtelu ndi di na Minna
Họtelu ndi di na Minna bụ ndi nwere ihe omenala pụrụ iche n'ụzọ pụrụ iche nke na-enye ndi ahịa ọhụrụ na ndi nke ochie ha ọnụnọ puru iche. Otutu họtelu dị iche iche di ka ndi nke a, ndi ọnụ ala ma ọ bụ nke oké ọnụ na ma ọ bụ nke họtelu okomoko ma ọ bụ ụlọ ndị ọbịa dị cha na Minna.
Họtelu Tunga Họtelu Suleja Họtelu Bida Họtelu Kontagora
Hydro Hotels Limited Brighter Hotel & Suites Doko International Hotels Ltd Haske Luxury Hotel Yayi Hotels Limited Dogon Koli Hotel Annexe